Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay baareyso weerarkii Xalane - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay baareyso weerarkii Xalane
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag u cambaareysay weerar hoobiyaal ah oo lagu tuuray xarunta shaqaalaha gargaarka ee Xalane sidoo kale fariisin weyn u ah Ciidamo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaas uu u muuqdo mid lagu doonayo in lagu wiiqo taageerada muuqda ee Bulshada Caalamka siiyaan Soomaaliya.
Sisoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan dhameystiran ku sameyneyso weerarka hoobiyeyaasha ah iyo duruufaha amni ee ku xeeran weerarkaas.
Hoos Ka Akhriso Warsaxaafadeedka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Previous articleQM oo si kulul uga hadashay weerarkii Xerada Xalane
Next articleGaari uu leeyahay Maamulka G/ Banaadir oo lagu qarxiyay Muqdisho